16 Enti homeda+ no twaam no, Maria Magdalene+ ne Yakobo maame Maria ne Salome de aduhuam bae sɛ wɔde rebɛsra no.+ 2 Na nnawɔtwe no da a edi kan+ no wɔkɔɔ ɔda no so ntɛm, na na owia apue.+ 3 Na wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Hena na obemunum ɔbo no afi ɔda no ano ama yɛn?” 4 Na wɔmaa wɔn ani so no, wohui sɛ wɔamunum ɔbo kɛse no afi hɔ.+ 5 Bere a wɔkɔɔ ɔda no mu no, wohuu aberante bi sɛ ɔte nifa so hyɛ atade tenten fitaa, na wɔn koma tui.+ 6 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommma mo koma nntu. Morehwehwɛ Nasareni Yesu a wɔbɔɔ no asɛndua mu no.+ Wɔanyan+ no na onni ha. Monhwɛ faako a wɔde no toe no.+ 7 Na monkɔ nkɔka nkyerɛ n’asuafo no ne Petro sɛ, ‘Ɔredi mo anim akɔ Galilea;+ ɛhɔ na mubehu no sɛnea ɔka kyerɛɛ mo no.’”+ 8 Na wopuei no woguan fii ɔda no so kɔe, efisɛ na wɔn ho popo na awɔse agu wɔn. Na wɔanka hwee ankyerɛ obiara, efisɛ na wɔabɔ hu.+ ASƐM NO AWIEI A ƐYƐ TIAWA Asɛm tiawa te sɛ nea edi so yi toa Marko 16:8 so wɔ akyiri yi nsaano nkyerɛwee ne nkyerɛase ahorow bi mu: Wɔkaa nneɛma a wɔahyɛ wɔn nyinaa ho asɛm tiawa kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ Petro nkyɛn no. Bio nso, eyinom akyi no, Yesu ankasa de daa nkwagye ho asɛnka kronkron a ɛmporɔw no somaa wɔn fi apuei kɔɔ atɔe. ASƐM NO AWIEI A ƐWARE Tete nsaano nkyerɛwee (Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi, Codex Bezae) ne nkyerɛase ahorow (Latin Vulgate, Curetonian Syriac, Syriac Peshitta) bi de asɛm a ɛware a edi so yi ka ho, nanso Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Sinaitic Syriac codex, ne Armenian Version no yi fi mu: 9 Bere a ɔsɔree ntɛm, nnawɔtwe no da a edi kan no, odii kan yii ne ho adi kyerɛɛ Maria Magdalene a otuu adaemone ason fii ne mu no. 10 Ɔkɔbɔɔ wɔn a na wɔka ne ho a wɔredi awerɛhow na wɔresu no amanneɛ. 11 Na wɔn de, bere a wɔtee sɛ waba nkwa mu ma wahu no no, wɔannye anni. 12 Bio nso, eyinom akyi no oyii ne ho adi tebea foforo mu kyerɛɛ wɔn mu baanu a wɔnam, bere a na wɔnam kwan so rekɔ akuraa no; 13 na wɔsan bae bɛbɔɔ wɔn a wɔaka no amanneɛ. Na wɔannye eyinom nso anni. 14 Nanso akyiri yi oyii ne ho adi kyerɛɛ dubiako no ankasa bere a wɔtete pon ho redidi, na gyidi a wonni ne wɔn komaden nti ɔkaa wɔn anim, efisɛ wɔannye wɔn a na wɔahu no sɛ wanyan afi awufo mu no anni. 15 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔde nyinaa. 16 Nea ogye di na wɔbɔ no asu no wobegye no nkwa, na nea onnye nni no de wobebu no fɔ. 17 Bio nso, nsɛnkyerɛnne yi bedi wɔn a wogye di no akyi: Wɔde me din betu adaemone, na wɔbɛka kasa horow, 18 na wɔde wɔn nsa bɛma awɔ so, na sɛ wɔnom awuduru a, hwee renyɛ wɔn. Wɔde wɔn nsa begu ayarefo so na wɔn ho ayɛ wɔn den.” 19 Enti afei, bere a Awurade Yesu kasa kyerɛɛ wɔn wiei no, wɔfaa no kɔɔ soro na ɔtenaa Onyankopɔn nsa nifa so. 20 Ɛnna wofii adi kɔkaa asɛm no baabiara, na Awurade ne wɔn yɛɛ adwuma na ɔnam nsɛnkyerɛnne a ɛka ho no so hyɛɛ asɛm no mu den.